♥ ႀကိဳမျမင္ႏိုင္တဲ့ မနက္ျဖန္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားတယ္....
Girl ။ ။ ဘာလဲ?? နင္က ငါ့အေျခအေနကို နားလည္မေပးေတာ့ဘူးလား … ငါ့မွာလည္း ငါ့ဘ၀နဲ႔ငါရွိေသးတယ္ …
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ငါတေယာက္ထဲ ေနပါရေစ … SMS ဆက္မပို႔နဲ႔ေတာ့ … ဒါဘဲ!!
Boy ။ ။ ဆယ္နာရီေတာင္ထိုးသြားပီ … ငါနင့္ဆီ SMS ပို႔ေနတာ နွစ္နာရီေတာင္ရွိေနပီ … နင္ငါ့ကို Reply ေလး တစ္ခုေတာင္ မလာဘူးေနာ္ …
ငါနင့္ကို အရမ္းလြမ္းတယ္ … အရမ္းလည္းခ်စ္တယ္!!
Boy ။ ။ နင့္အတြက္ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားလုိ႔ ငါေတာင္းပန္ပါတယ္ … နင္အိပ္ေစခ်င္ရင္ ငါအိပ္ပါေတာ့မယ္ … Good Night Baby … အရမ္းခ်စ္တယ္!!
နင့္ကိုယ္နင္လည္း အျမဲတမ္း ဂရုစိုက္ေနာ္ … ငါနင့္ေဘးမွာေနျပီး အျမဲတမ္း လမ္းျပေပးေနမွာပါ ... ငါတကယ္ကိုပဲ နင့္ေဘးမွာပဲ ရွိေနမွာပါ … နင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ထားခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး !!
Girl ။ ။ နင္ႏိုးေနၿပီလား?? မႏိုးေသးရင္ ထေတာ့ေလ!! ငါမေန႔ညက ေျပာခဲ့မိတာေတြ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ …
ငါတကယ္ကို အလုပ္ေတြရႈပ္ေနလို႕ပါ… မနက္စာထစားေတာ့ေနာ္, ငါလည္း ေက်ာင္းသြားရေတာ့မယ္ …
Girl ။ ။ Hey!! ဘာလို႕ခုထိ reply မလုပ္ေသးတာလဲ?? ေန႕လည္စာစားခ်ိန္ေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ …
နင္ဘာလို႕ အတန္းမတက္တာလဲ?? နင္ Ph Bill ကုန္ေနၿပီလား?? ေက်းဇူးျပဳၿပီး ငါ့ကိုဆက္သြယ္စမ္းပါဟာ …
Boy ။ ။ သမီးခ်စ္သူက သူ႕ကိုခ်စ္တဲ့သူေတြ အားလံုးကိုထားခဲ့ၿပီ … သူေနမေကာင္းတာ သမီးမသိဘူးလား??
သူ႕ကို သံုးႏွစ္ပဲေနရေတာ့မယ္လို႕ ဆရာ၀န္ကေျပာထားတယ္ေလ … မဟုတ္ပါေစနဲ႕လို႕ အန္တီတို႕လည္း ဆုေတာင္းခဲ့ၾကတာပဲ သမီးရယ္ ..
ဒါေပမယ့္ သူ႕ႏွလံုးက အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ … ဒီေန႕မနက္ အန္တီသူ႕ကိုနိုးတဲ့အခါ သူအသက္မရွိေတာ့ဘူး သမီးရယ္ …
“နင့္ကိုယ္နင္ အၿမဲဂရုစိုက္ပါ … ငါဘယ္ဘ၀ကိုပဲေရာက္ေရာက္ ငါေပ်ာ္ပါတယ္…ေက်းဇူးျပဳၿပီး ငါ့အတြက္ မငိုပါနဲ႕!!
ငါ့က်န္းမာေရးအေျခအေနကို နင့္ကိုမေျပာျပခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ .. နင္ thesis အတြက္ အလုပ္ေတြရႈပ္ေနေတာ့ ငါ့ကိစၥေၾကာင့္ နင္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ပါ ..
ငါနင့္ကို မစိုးရိမ္ေစခ်င္ဘူး … ေနာက္တစ္ေန႕မနက္မွာ မႏိုးထႏိုင္ေတာ့မွာ စိုးလို႕ ငါညေတြဆို အိပ္ရမွာ ေၾကာက္တယ္ ..
အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ရင္လည္း ေနာက္တစ္ေန႕မနက္မွာ နင့္ကိုေတြ႕ခြင့္ရပါေစ .. နင္နဲ႕အတူရွိခြင့္ရပါေစလို႕ ငါအၿမဲဆုေတာင္းတယ္ …
ငါနင့္ကိုအရမ္းခ်စ္တယ္ .. ဒီေန႕အတြက္ နင္နဲ႕စကားအမ်ားႀကီးမေျပာရလို႕ ငါအရမ္း၀မ္းနည္းတယ္ … ဒါေပမယ့္ ငါနင့္ကိုနားလည္ပါတယ္ …
နင္ thesis မၿပီးလို႕မျဖစ္ဘူးေလ .. ငါနင့္ကိုအရမ္း အရမ္းခ်စ္တယ္ … အၿမဲတမ္း ႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္ခိုင္နဲ႕ ရပ္တည္သြားမယ္လို႕ ငါ့ကိုကတိေပးပါ ..
ငါအခုနင့္ေဘးမွာ ရွိေနတယ္…အၿမဲတမ္းလည္း ရွိေနမွာပါ …”
♥ ႀကိဳမျမင္ႏိုင္တဲ့ မနက္ျဖန္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ သင္ခ်စ္တဲ့သူကို တတ္ႏိုင္သမွ် အရာအားလံုးထက္ ပိုၿပီး ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္ ... ♥
erdit by foe khrr
ကောင်လေးက သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဆီ sms ပို့လိုက်တယ် …
Boy ။ ။ Hi Baby!! .. နေကောင်းရဲ့လား?? ငါတော့ ဒီနေ့ အရမ်းပျော်နေတယ်!!
Girl ။ ။ နေဦး, ခဏနေမှ sms ပို့ရအောင် … ငါဒီမှာ Thesis အတွက် ခေါင်းရှုပ်နေလို့
Boy ။ ။ အဲ့ဒါကို နောက်မှလုပ်လို့မရဘူးလား? ငါ နင့်ကို အရမ်းလွမ်းနေလို့ …
Girl ။ ။ မရဘူး … ဒါကို အပြီးလုပ်ရမှာ …
Boy ။ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး တောင်းဆိုတာပါ … ဒါကို နင် နောက်နေ့ပြီးအောင် လုပ်နိုင်မှာပါ …
Girl ။ ။ ဘာလဲ?? နင်က ငါ့အခြေအနေကို နားလည်မပေးတော့ဘူးလား … ငါ့မှာလည်း ငါ့ဘဝနဲ့ငါရှိသေးတယ် …
အခုလောလောဆယ်တော့ ငါတယောက်ထဲ နေပါရစေ … SMS ဆက်မပို့နဲ့တော့ … ဒါဘဲ!!
Boy ။ ။ Sorry Baby … I love you … အရမ်းချစ်တယ် … နောက်မှပဲ SMS ထပ်ပို့လိုက်တော့မယ်နော် …Bye
Boy ။ ။ ည ရှစ်နာရီ ရှိနေပီ … ငါနင့်ဆီ SMS မပို့ဘဲ အကြာကြီး မနေနိုင်ဘူး … ငါနင်နဲ့ စကားတွေပြောချင်တယ် …
Boy ။ ။ ငါ့ SMS တွေ Reply ပြန်မလုပ်ဘူးနော် … နင့် Thesis အတွက်လုပ်နေတာ ပြီးသွားပြီလား ??
Boy ။ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး Reply လုပ်ပါကွာ .. ငါ စိတ်ပူလာပီ!!
Boy ။ ။ ဆယ်နာရီတောင်ထိုးသွားပီ … ငါနင့်ဆီ SMS ပို့နေတာ နှစ်နာရီတောင်ရှိနေပီ … နင်ငါ့ကို Reply လေး တစ်ခုတောင် မလာဘူးနော် …
ငါနင့်ကို အရမ်းလွမ်းတယ် … အရမ်းလည်းချစ်တယ်!!
Boy ။ ။ @_@ နင်နေနိုင်လိုက်တာနော် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်ဘေးမှာငါ အမြဲရှိနေမှာပါ … ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်!!
Girl ။ ။ ငါ့ဆီ SMS မပို့နဲ့တော့လို့ ငါမှာထားတယ်မှတ်လား … ငါ Thesis ပြီးတဲ့အချိန် Reply ပြန်လုပ်မှာပေါ့ … နင်ဒါကို နားမလည်ဘူးလား?? ငါမအားဘူးဆိုတာကို လက်ခံပေးဖို့ အဲ့ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေလား?? နင့်အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတော့သလိုပဲ … သိပ်ပြီးတော့ Over ဖြစ်မနေနဲ့ .. နင် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်သင့်နေပီ!!
Boy ။ ။ နင့်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားလို့ ငါတောင်းပန်ပါတယ် … နင်အိပ်စေချင်ရင် ငါအိပ်ပါတော့မယ် … Good Night Baby … အရမ်းချစ်တယ်!!
နင့်ကိုယ်နင်လည်း အမြဲတမ်း ဂရုစိုက်နော် … ငါနင့်ဘေးမှာနေပြီး အမြဲတမ်း လမ်းပြပေးနေမှာပါ ... ငါတကယ်ကိုပဲ နင့်ဘေးမှာပဲ ရှိနေမှာပါ … နင့်ကို ဘယ်တော့မှ ထားခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး !!
Girl ။ ။ နင်နိုးနေပြီလား?? မနိုးသေးရင် ထတော့လေ!! ငါမနေ့ညက ပြောခဲ့မိတာတွေ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် …
ငါတကယ်ကို အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပါ… မနက်စာထစားတော့နော်, ငါလည်း ကျောင်းသွားရတော့မယ် …
Girl ။ ။ မထသေးဘူးလား?? အတန်းချိန်နီးနေပြီလေ … နင်နိုးရင် ငါ့ကို reply ပြန်လုပ်ဦး!!
Girl ။ ။ Hey!! ဘာလို့ခုထိ reply မလုပ်သေးတာလဲ?? နေ့လည်စာစားချိန်တောင် ရောက်နေပြီ …
နင်ဘာလို့ အတန်းမတက်တာလဲ?? နင် Ph Bill ကုန်နေပြီလား?? ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကိုဆက်သွယ်စမ်းပါဟာ …
Boy ။ ။ သမီးချစ်သူက သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီ … သူနေမကောင်းတာ သမီးမသိဘူးလား??
သူ့ကို သုံးနှစ်ပဲနေရတော့မယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောထားတယ်လေ … မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ အန်တီတို့လည်း ဆုတောင်းခဲ့ကြတာပဲ သမီးရယ် ..
ဒါပေမယ့် သူ့နှလုံးက အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ … ဒီနေ့မနက် အန်တီသူ့ကိုနိုးတဲ့အခါ သူအသက်မရှိတော့ဘူး သမီးရယ် …
ဒါကတော့ သမီးအတွက်ဆိုပြီး သူရေးခဲ့တဲ့ message လေးပါ … သူကိုယ်တိုင်တော့ မပို့နိုင်ရှာတော့ဘူးပေါ့ကွယ် ..
“နင့်ကိုယ်နင် အမြဲဂရုစိုက်ပါ … ငါဘယ်ဘဝကိုပဲရောက်ရောက် ငါပျော်ပါတယ်…ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့အတွက် မငိုပါနဲ့!!
ငါ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို နင့်ကိုမပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် .. နင် thesis အတွက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတော့ ငါ့ကိစ္စကြောင့် နင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ ..
ငါနင့်ကို မစိုးရိမ်စေချင်ဘူး … နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ မနိုးထနိုင်တော့မှာ စိုးလို့ ငါညတွေဆို အိပ်ရမှာ ကြောက်တယ် ..
အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်လည်း နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ နင့်ကိုတွေ့ခွင့်ရပါစေ .. နင်နဲ့အတူရှိခွင့်ရပါစေလို့ ငါအမြဲဆုတောင်းတယ် …
ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ် .. ဒီနေ့အတွက် နင်နဲ့စကားအများကြီးမပြောရလို့ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ် … ဒါပေမယ့် ငါနင့်ကိုနားလည်ပါတယ် …
နင် thesis မပြီးလို့မဖြစ်ဘူးလေ .. ငါနင့်ကိုအရမ်း အရမ်းချစ်တယ် … အမြဲတမ်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ငါ့ကိုကတိပေးပါ ..
ငါအခုနင့်ဘေးမှာ ရှိနေတယ်…အမြဲတမ်းလည်း ရှိနေမှာပါ …”
♥ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ မနက်ဖြန်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် သင်ချစ်တဲ့သူကို တတ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးထက် ပိုပြီး ဦးစားပေးသင့်ပါတယ် ... ♥